Maxaad kala socotaa Hawadda Soomaaliya, Dhaqaalaha kasoo xarooda & Tirada diyaaradaha
May 18, 2017 - Written by Kulmiye
Sida aan ogsoonahey, warar ay masuuliyiin UN-ta ah sheegaan inta badan ayaa waxa ay ku yidhaahdaan hawada Soomaaliya waxaa maalinkii dulmara ama isticmaasha diyaarada gaadhaya 80 maalinkii, hadaba akhristow, tiradaasi waa tiro marin habaabin ah oo la doonayo in lagu qariyo dhaqaalaha saxda ah ee ka soo xarooda hawada duulista Soomaaliya.
Garoonka Aaden Cadde International ee Xamar waxaa maalinkii ku soo daga diyaarada gaadhaya 80 dayuuradood, waa hadal ay wararka ka sii daayeen masuuliyiinta garoonka Xamar sanadka markuu ahaa 2013.
Hadeynu dib u milicsano diyaaradaha ku soo daga garoonka Cigaal ee Hargeysa waxaa qiyaastii maalinkii soo dagta 39 diyaaradood, weyna ka badantahey tiradan. Labada tusaale ee Xamar iyo Hargeysa ayaa naga kaafinaya iney burburinayaan hadalkii masuuliyiinta Soomaaliya iyo UN-ta ee ahaa 80 diyaaradood ayaa Soomaaliya hawadeeda isticmaasha, wadanka intiisa kale cadadka diyaaradeed ee ku soo daga waa ay fara badanyihiin lamina shaacin.
1) Tirada diyaaradeed ee soo caga dhigta Soomalaiya (commercial terminal)
2) Tirada diyaaradeed ee dul mara hawada Soomaaliya (fly-over)
– In lacag qaadistu ay ku xirantahey inta daqiiqadood ama saacadood ay diyaaradu isticmaaleyso hawada ama ay ku dhax jirto hawada dalka barri ha ahaato ama bad ha ahaato
Tirada Lacageed ee intaasu dhantahey waa sidatan, ogsoonoow, masuuliyiinta Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in diyaarad kasta oo isticmaasha hawada Soomaaliya, waa barriga oo kaliya, laga qaado lacag $275, waa hadalka ay yidhaahdeen iyagoon aqoon iyo khabiirnimo u laheyn in kharash qaadistu ay tahey mid ku dajisan daqiiqad iyo saacad kasta oo ay diyaaradu hawa Soomaaliyeed isticmaaleyso, kaba dhig tan daqiqad isticmaasho iyo tan saacad isticmaashaba in laga qaado $275 dollars halkii mar ay foodaba la gasho hawa Soomaaliyeed.
605 X $275 = $166,375 waa tirada dakhliga ee maalin walba ka soo xarooda hawada Soomaaliya bad iyo barriba, 605 waa diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya bad iyo barriba
82 X $275 = $22,550 waa tirada dakhliga ee maalin walba ka soo xarooda hawada dhuleed ee Soomaaliya, waana tirada ay UN-ta ku maaweeliso masuuliyiinta Soomaaliya, waa tiro waxba kama jiraan ah, waa tiro marin habaabin ah, waa tiro dhac iyo khiyaano ku jirta.
Tan labaad ee tirada ay UN-ta ku maaweeliso masuuliyiinta Soomaaliya bishii waa: $22,550 X 30 =$676,500, sanadkiina waa $676,500 X 12 = $8,118,000 waa siddeed malyan.
Tirada UN-ta ay sheegto waa mid aan wada ogsoonahey, mana dhaafto mar walba 5 malyan, 6 malyan iyo 8 malyan, waa sida ay wararka ka sheegaan mar walba.
Akhristoow, iyo qof kastoo jecel in hantida Soomaaliyeed ay Soomaaliya iyo dadkeedu leeyihiin, waxaa nala gudboon in aan ka hortagno dhaca lagu hayo hantida Soomaaliyeed dhul, bad iyo hawada, waana masuuliyad na wada saaran dhammaanteen.